LG G3 Android Version 5.0. - MYSTERY ZILLION
LG G3 Android Version 5.0.
LG G3 မှာ Android 5.0 သွင်းပြီးနောက် မြန်မာစာ ဆက်ဖတ်လို မရတော့ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိရင် ပြောပြပေးကျပါ။ ကျေးဇူးပါ။
Android 5.0 မှာ unicode ကို default ပါပါတယ်။ Root လုပ်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီပြန်သွင်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
Root မလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းပြင်လို့ရတာလေးများသိရင် ကူညီပါလာ။ ^:)^
LG G3 က ရန်ကုန်က ဝယ်ထားတာလား ? Root မလုပ်ပဲရဖို့ original rom မှာ ဇော်ဂျီ ပါလာမှ ဖြစ်မယ်။ ရန်ကုန်က ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန် က LG support ကိုပဲ report လုပ်မှ ဖြစ်မယ်။
ဥရောပကပါ ရန်ကုန်ကဝယ်ထားတာမဟုတ်ပါ။ ဘယ်မြန်မာဖေါင့်မှလဲ ထပ်သွင်းလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒါကို download ချပြီးတင်လိုက်ပါ
Settings ပြောင်းရုံဖြင့် မြန်မာစာကိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်း Settings မှာ Language & input, Language(ဗမာ), LG Keyboard Settings, input language and type(Burmese-မြန်မာ)
မြန်မာဖောင့်မပါသောတစ်ချို့ LG ဖုန်းအတွက် Settings, General, Display, Font type (LGMyanmar), Language & input, Default (Bagan Keyboard)အောက်မှာ အမှတ်ခြစ်